Theatre "Ngoba black emfuleni" (Petersburg), kukhona okuncane eminyakeni engaphezu kuka-30. It yasungulwa ngu umqondisi Oleg Mendelssohn. repertoire yenkampani kuhlanganisa imikhiqizo izethameli zabantu abadala, futhi izilaleli yezingane.
Theatre "Ngoba black emfuleni" lavulwa ngo-1983 ngokusemthethweni. Ngaphambi kwalokhu, umsunguli wayo Oleg Mendelssohn bahlangana abathandi qembu Yusupov Palace. Kodwa lapho Kwakugcwele, futhi ukusebenza babeyithanda kakhulu akuvamile - kanye ngesonto.
Umqondisi futhi abadlali bakhe zishintshile ndawo. Bona ngo-1980 bathuthela beya emzaneni Kolomyagi. Kube qembu wasebenza iminyaka emithathu ngokwethukela, futhi ngo-1983 ethiyetha lavulwa ngokusemthethweni "Ngalé Black emfuleni."
Iminyaka engu-10 iqembu esebeké imikhiqizo engaphezu kwamashumi amabili. I repertoire ayehlanganisa kokubili abadala kanye nemidlalo yezingane zabuna, nemisebenzi abalobi wesimanje.
iminyaka engu-11 kamuva - ngo-1994 - kodwa leyo ndawo yeshashalazi wathola isimo a professional futhi isakhiwo esisha. Qembu iyiswe Herculean Avenue, lapho uhlala kuze kube yilolu suku.
Ihholo yamabhayisikobho incane, izihlalo ezingu-80.
Inkampani usebenza hhayi kuphela kwisayithi yazo, ngokuvamile kakhulu abaculi ukukhombisa ukusebenza kwabo ezigabeni ezinkulu edolobheni Petersburg. Futhi nabalingisi ngenkuthalo baqhubeke nohambo. Baye bavakashela khona kakade lamadolobha amaningi aseRussia kanye ezweni elaliyiSoviet Union. Kwaba nemiphumela emihle kakhulu ethiyetha uye babuka eJalimane.
Qembu yaseshashalazini incane, kodwa abaculi abanamakhono ukusebenza kulo. Ngokuvamile osaziwayo bamenyiwe ukuba babambisane nezinye ebhayisikobho. Eminyakeni ezahlukene esiteji "eMfuleni Black" bakhanya Julia Rudina, Mikhail Matveev, Gennady Winds Era Ziganshin, u-Alexander Lykov, Andrew Tolubeev nabanye.
Kuze 2004, kodwa leyo ndawo yeshashalazi kwadingeka studio lalo. Lapha senza izingane zesikole kusukela eminyakeni 10 kuya 16. Babehlanganyela ukusebenza futhi wafundisa eyala ehlukahlukene professional - ukucula, oyibamba, nobuciko bokusina, ukunyakaza esiteji. Abaningi abathole iziqu baye baba abaculi. Iningi qembu baphuma Studio.
Ngo-2011, impilo yamabhayisikobho "Ngo eMfuleni Black" kwaba yesehlakalo esibuhlungu - ukulahlekelwa okukhulu. Oleg wafa Mendelssohn - umsunguli, umqondisi kanye nemeneja. Qembu manje uhlala ngokuzama ukwenza konke imibono Oleg hhayi Ngishoné lwanyamalala, kodwa kuyiqiniso. Phakathi nale minyaka embalwa ngaphandle O. Mendelsohn ke wakhululwa imikhiqizo emisha eminingana.
Eminyakeni emithathu edlule, ngo-2013, kodwa leyo ndawo yeshashalazi yayigubha iminyaka engu wamashumi amathathu. Ngu lolo suku, iqembu ifikile egcwele amandla okudala nesifiso sokungafuni ukuyeka, hhayi yima unganyakazi futhi ukhule. Lapha athungatha izinhlobo ezintsha, kudlala, abalobi. Theatre ufuna izinhlobo ezintsha zokuxhumana nge izilaleli, okuyinto kuyoba bavumelane izikhathi bese uvumele ukukhuluma izethameli zamanje uyaqonda ulimi wakhe, uthinte umphefumulo, bajabule izinzwa, kodwa inkampani izama ukuhlala ethembekile emasikweni Russian idrama esikoleni futhi uyaqhubeka exoxa ne nezilaleli izindikimba okuphakade.
Ngenkathi 2014-2015 Theatre "Ngemuva eMfuleni Black" ethulwa zriletyam yayo premieres eziningana: "Umlando amabhere panda ilandiswa saxophonist ubani umngane e Frankfurt," "Umngane wami Carlson", "Uthando Izincwadi," "Little ubugebengu yasemshadweni" "amabili."
Ngenkathi wamanje (2015-2016) ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini kwathatha elinye premieres ezine, ezimbili zazo senzelwe nezilaleli kwezingane. Ibonisa: "Ngifundise ukundiza", "Witch ekamelweni", "ubugebengu Little yasemshadweni" futhi "Umlando elilodwa ebusuku."
Theatre "Ngoba black emfuleni" bahlangana endaweni yesehlakalo qembu lakhe elincane.
Yuliya Kaim nabanye.
Theatre "Ngoba black emfuleni" repertoire inikeza ababukeli yayo yilokhu okulandelayo:
"I uLieutenant esiqhingini Inishmore."
"Amanothi udokotela yesifundazwe."
"Indaba ka-ngobusuku obubodwa."
Ungashiyi ngaphandle ukunakwa kanye izilaleli young Theatre "Ngoba black emfuleni." Iphosta inikeza abafana namantombazane la magama alandelayo:
"Oorfene Deuce, noma Imfihlakalo amatshe amathathu."
"Umholi we Redskins."
"Sawubona, Mary Poppins."
"Le ndoda kancane ihora."
"Umngane wami Carlson."
"I Tale of umPristi futhi Thim yakhe Balda".
"UMnu Sherlock Holmes."
"Zoki futhi Bada".
"Nomlayezo Wokufundisa Ngokuvakasha Andersen".
"Ngifundise fly" nabanye.
Oleg Mendelssohn wadala yaseshashalazini "Ngoba black emfuleni." Umqondisi wazalwa ngo-1946 e-Leningrad. Kusukela ebuntwaneni, wafunda idrama esikoleni Isigodlo Amaphayona. Nge engu-16 wayesebenza njengenkosi yabo kwempahla BDT. Ukusebenza yaseshashalazini kanye unomphela pristutvie ukuprakthiza amyisa yokuthi Oleg wanquma ukuba abe filmmaker.
Eminyakeni 17, O. Mendelsohn waba inhloko yalawa studio esikoleni boarding. Lapha bazuza okuhlangenwe nakho wokuqala njengomnikelo umqondisi.
Eminyakeni emibili kamuva, u-Oleg wangena LGITMiK ehhovisi umqondisi sika. Ngemva kokuthweswa iziqu, wamiswa umqondisi we Rostov Youth Theatre.
Emuva ngo-1975 eLeningrad, wafundisa esebenza ngaleso LGITMiK kanye Ballet School Vaganova. Ngesikhathi esifanayo wahola ethiyetha amateur ngesikhathi Yusupov Palace.
Theatre "Ngoba Black umfula," usho eyasungulwa ngo-1983. It wadalwa eyisidalwa studio intsha, ukusebenza ezisekelweni ezahlukene. ngokushesha kakhulu sebenzi it jikisa nga yaseshashalazini egumbini lalo.
Oleg Yurevich Mendelson kwaba umqondisi unomphela futhi umqondisi bokubeka qembu kwaze kwaba sekufeni kwakhe. Washona ngo-May 2011.
Ngaphezu yokubuka ukusebenza, kodwa leyo ndawo yeshashalazi "Esikhathini black emfuleni" inikeza ezihlukahlukene services.
Lapha ungakwazi ukuthatha noma yisiphi yokuqasha yemidlalo noma zomkhosi imvunulo, kanye nezicathulo ezigcawugcawu. Carlson, Eqhweni Ntombazane, Santa Claus, Musketeer, Cinderella, Clown, Pirate - kukhona ingubo ukuze yaseshashalazini, amakhonsathi, ukuthathwa izithombe noma umane Carnival.
Empeleni leli hholo inezidingo yokuqopha yayo. Lapho amasevisi kunikeziwe digitizing nokuhlela izinto zomculo. Esikhathini studio ungarekhoda iyiphi disc. Ikhishwa ukuhlela umsindo. Empeleni leli hholo inikeza ithuba ngezwi ukurekhoda, vocals, amathuluzi, ulwazi ukukhangisa lokusakaza.
Lapha ungakwazi oda umlilo pyrotechnic show noma ngabe isiphi isikhathi, noma ngabe ukuphi sizoqhutshwa - ngaphandle, ngaphakathi endlini, kumhlaba noma amanzi.
Yaseshashalazini, "Ngoba Black emfuleni" ungakwazi futhi oda evumelanisa ngazinye Love timphahla tekubhukusha.
Omunye abadlali edume kunayo yaseshashalazini "Ngo eMfuleni Black" - UNatalia Tkachenko. Yena kubabukeli ezaziwa kusukela izindima eziningi emabhayisikobho nasemidlalweni ewuchungechunge yethelevishini. Umculi ozalwa eLeningrad ngo-1972. Ethola iziqu SPbGATI. Wasebenza kule nkundla: "Youth" phezu Fontanka, "Ingosi nosomahlaya", "Comedy" igama NP Akimova.
Wayedlala ezingaphezu kuka-80 amafilimu nasemidlalweni ewuchungechunge yethelevishini.
Natalia izinkanyezi ku amafilimu ezilandelayo:
"Inkulumo-ze ithimba" Beat isitha! ".
"May Day" nabanye.
Omunye abadlali ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini - Sofia Dushkin. Kusukela ebuntwaneni, watadisha umculo. Ngo-1999, yena iziqu eSikoleni of Gnesin e "Umlingisi yaseshashalazini zomculo", bese uqondisa SPbGATI umnyango.
Iminyaka yokuqala yomsebenzi eMoscow. Khona-ke wafika ethiyetha "Esikhathini black emfuleni." Lapha, okusebenza hhayi kuphela njengoba kumdlali kodwa futhi njengoba umqondisi. I repertoire we qembu a ukusebenza ambalwa okuhleliwe UZandile.
S. Dushkin uhileleke kumaphrojekthi ahlukahlukene omculo nakwamanye amasinema eMoscow Petersburg.
Ngenxa izindima yakhe nomculo ezifana "Tanz der Vampire", "Nord-Ost", le Tomorrowland, "Isimangaliso Ordinary" futhi "izihlalo ezingu-12."
Theatre "Ngoba black emfuleni" lobuya izilaleli uthola ezahlukene. Hhayi yonke imikhiqizo efana umphakathi.
Enye ukusebenza Intandokazi izithameli "Diary of udokotela yesifundazwe." Le nhlanganisela ngokoqobo ezizungezile futhi amahlaya emnyama. imisebenzi Kuthunyelwe abanamakhono, ezithakazelisayo futhi zesimanje.
Enye ukusebenza okungukuthi phakathi ethandwa kakhulu - ". UMnu Sherlock Holmes" Staging ligcwele esonta ezingalindelekile, uhambo, ezisunguliwe, kumnandi futhi pyrotechnics yangempela.
Hhayi ngaphansi lidumile umphakathi futhi udlale "Roadside Picnic". Lapha izibukeli ngokungaqondile abathintekayo kule senzo.
Phakathi ukusebenza, okuyinto ungathola imibono engakhi zihlanganisa "I uLieutenant ne Inishmore isiqhingi." Amalungu amaningi izilaleli bhala ukuthi lokhu ingenye ukusebenza nokubi kakhulu engake ngababona. Staging mediocre, komsindo esiteji, ukuthi yona umbono, futhi eningi inhlamba.
Phakathi imikhiqizo izingane ozithandayo kakhulu kunesithi "Lapho Oorfene Deuce, noma Imfihlakalo amatshe amathathu" futhi "Witch ekamelweni." Kuyathakazelisa, kumnandi, yezinganekwane uyafundisa ngoba abafana abancane ezinhle namantombazane. Kodwa abazali lababukeli abasha phakathi izibuyekezo zabo babhala izingane ukuthi hhayi kuphela, kodwa bona ngokwabo wabukela lezi ukusebenza enkulu, bakujabulela futhi akazange ngizithola. Abafana namantombazane, ngisho izingane, ubuke lezi izindaba ngaphandle kokuma. Ukukhiqizwa "Witch ekamelweni", ngokuvumelana izilaleli, nezindawo ezinhle kakhulu, okuyizinto nje - abaculi zonke beat zabo ezinkulu. Futhi in the play eziningi kangaka okutholakele ezahlukene umqondisi ezithakazelisayo futhi yangempela.
Abalingisi Theatre "Ngoba Black emfuleni" abathandwa umphakathi. Ngokuvamile izibukeli ezimi uzizwe oya emakhosini azo, abanamakhono, play brilliant iyiphi indima futhi kungenzeka ukujwayela izithombe zabo.
lonke leli hholo kuyaziwa Petersburg, anakho abalandeli bakhe unomphela abaqotho abangamazi usivakashele iminyaka eminingi, bese ulethe lezingane zabo nabazukulu.
Kuphi futhi kanjani ukuze uthole
Eceleni nkundla indawo zomlando "ngoba umfula omnyama." Ikheli kuye Bogatyrsky lemininingwane, inombolo yendlu 4. Abaseduze kuye esiteshini - "Pioneer". Kutholwe emhlabeni yaseshashalazini emgwaqweni: Aerodrome, Kolomyazhsky Avenue, Isiliva Boulevard nabanye.
indawo zomlando, eduze okuyinto Herculean Avenue - kuyinto isikwele lapho Duel NJENGOBA Pushkin nge Dantes. Kukhona efakwe uphawu yesikhumbuzo.
Namanabukeni "Huggies Ultra Comfort" (abafana, amantombazane): Izibuyekezo